Iikhombisi ze-Brazing Coil Design Ukwenza kunye nomthengisi eChina
Ikhaya / Iindleko zokushushumbisa iikhoyili / I-Coil yoKwenziwa kweBrazing
Iikhoyili zeBrazing Coil
Udidi: Iindleko zokushushumbisa iikhoyili tags: i-couction brazing coil, coil induction, uyilo lwekhoyili lwangaphakathi, iikhoyili zokufakelwa, ukucwangcisa ukukhenketha kwecoil design, i-induction enyibilikisayo, inductor
Kungakhathaliseki ukuba bunjani ubungakanani, ubungakanani, okanye isitayela coil induction Ufuna, sinokukunceda! Nazi ezinye ezimbalwa zamakhulu ezinto zoyilo esizisebenzileyo. Iipancake coil, ii-coil ze-helical, i-coil ye-concentrator… isikwere, isangqa kunye ne-tubing engunxantathu… Ukujika kube kanye, ukujika ezintlanu, ishumi elinambini-ukujika… phantsi kwe-0.10 ″ ID ukuya kwi-ID engaphezulu kwe-5…… ukufudumeza kwangaphakathi nangaphandle. Nokuba yeyiphi na imfuno zakho, sithumele imizobo yakho kunye neenkcukacha zesikowuteshini esikhawulezileyo. Ukuba umtsha ukufudumeza ngokungenisa, sithumele iinxalenye zakho kuvavanyo lwasimahla Yile coil yoqheliso inconywe sisixhobo esifanelekileyo esihlala sichaza impumelelo okanye ukusilela kwenkqubo yonke.
Ukukhenkcezwa kweCon Design Coil Design
Yenziwe ngococeko olususelwa kwi-tubing okanye kwi-sahani ukucwangcisa ukupakisha imikhoyili ichukunyiswe sisicelo, ukukhethwa rhoqo, ukungqinelana kwamandla kunye nexesha lokushisa. Injongo yekhoyili yokufakwa kukudala iphethini ye-flux ye-flux ukuvelisa umendo wangoku kwisiqwengana somsebenzi ngokukhetha ubushushu kwindawo yendibano eziza kubhengezwa.
The Coil coil kufuneka ibeke ngokufanelekileyo kwibandla evumela ukufudumala okufunekayo ukuba kwenziwe. Umgca womoya okanye indawo yokudibanisa phakathi komxube womsebenzi kwaye ngaphakathi ngaphakathi kwileyili kufuneka ihliswe ngezantsi ngenxa yezizathu zokusebenza kakuhle. Iimpawu zezinto eziphambili ze-0.125 intshi (3.175 mm) ukuya kwi-intshi ye-0.250 (i-6.350 mm) zinengqiqo yokubhaka nge-coil ye-helical.
Iziqendu ezingenakunzima zingadinga iimfuneko ezongezelelweyo ezifuna amandla angaphezulu ukunqoba oku kulungelelanisa ukulungelelanisa. Ezi ziko ziquka imeko apho ikhoyili ejikelezileyo eneqhekeza elikhulu lomoya okanye i-coil engeyiyo yokujikeleza iyadingeka ukuze ufinyelele kwindawo yebhasi.
Indawo yokufudumala inquma ubungakanani bekhoyili yokungenisa. An coil induction elifutshane kakhulu liya kufuna ixesha elide lokufudumala ukuvumela ukushisa, ngokuqhuba, ukumboza loo ndawo. An i-coil coil Ukugqithisa kakhulu kuya kushushumbisa isinyithi kunokuba kuyimfuneko, ngoko ke kusebenza kakuhle. I-HLQ Ukuchisa Umshini wokushisa Co unamaphulo athile akhethekileyo okubilisa ukufudumeza kwendawo, kunye neempompo ezifudumeza ngokufanelekileyo ngaphandle kokujikeleza umxube womsebenzi.
Ukufakela kwi-tubing okanye iplati yokubhebhetheka kakhulu, ukuklanywa kwe-coil ye-induction kuthonywe ngumsebenzi, ukukhethwa kwexesha, ukuxinwa kwamandla kunye nexesha lokushisa. Injongo yekhoyili yokuqulunqa ukudala iphethini yamagnetic flux ukuze kuveliswe umendo wangoku kwinqanaba lomsebenzi ukutshisa ngokukhethekileyo indawo yendibano ukuba ibhonwe.
Ikhoyili ye-induction kufuneka ibekwe ngokuchanekileyo kwindibano ivumela ukufudumeza okufunekayo kufezekiswe. Isithuba somoya okanye indawo yokudibanisa phakathi kwesiqwenga somsebenzi kunye nengaphakathi lekhoyili kufuneka sincitshiswe ngenxa yezizathu zokusebenza kakuhle. Uyilo oluqhelekileyo lwezithuba ezi-intshi ezi-0.125 (3.175 mm) ukuya ku-0.250 ye-intshi (6.350 mm) zisengqiqweni ukuba zixhanywe ngentsimbi ye-coil.
Indawo eza kufudunyezwa igqiba ubude bendawo yokufakwa. I-coil ye-induction emfutshane kakhulu iya kufuna ixesha elide lokufudumeza ukuvumela ubushushu, ngokuhambisa, ukugubungela le ndawo. Ikhoyili ye-induction ebanzi kakhulu iyakutshisa ngakumbi kunesinyithi, kwaye ke ayisebenzi kakuhle. I-HLQ lokutshisa I-Co inezinto ezininzi ezizodwa zokwakha i-coil ye-coil yokufudumeza kwendawo, kunye nekhoyili ezishushu ngokufanelekileyo ngaphandle kokujikeleza isiqwenga somsebenzi.
Ukukhenkcezwa kwe-Coil Design ne-Design Basic
ukucwangcisa ukupakisha imikhoyili
Ukukhutshwa kweeKhoyili zokuCoca
Iikhompyutheni zeekhamera zeFlexible PWHT induction Ukunyusa ukunxilonga